Na mbara ụwa Saturn: ihe ọ bụla ị chọrọ ịma | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị laghachiri na mbara igwe. Mgbe anyi nyochachara njimara nke anyi anwụAnyi ebidola kowara mbara ala nile otu na otu. Anyị hụrụ na Mercury ọ bụ ụwa kacha dịrị nso na anyanwụ, Jupita ndị kasị ukwuu na mbara igwe na Mars ọ nwere ike ibu ndụ. Taa, anyị ga-elekwasị anya na Etwa Saturn. Otu n'ime mbara ala abụọ kachasị ukwuu ma ama maka mgbanaka asteroid. Ọ bụ mbara ala nwere ike ịlele anya n’elu ụwa.
Dochọrọ ịma ihe nzuzo niile Saturn? Gụọ na chọpụta.
2 Kedu ụdị ime na ikuku nke Saturn dị?
3 Ọnwa na satellites
4 Omume site na ụwa
Saturn bụ otu ụwa. Maka ndị sayensị, a na-ahụta ya otu mbara ala kachasị atọ ịmara maka sistemu igwe niile. Ọ na-egosipụta na ọ nwere njupụta dị nnọọ ala karịa mmiri na ọ bụ hydrogen mejupụtara ya, yana ntakịrị helium na methane.
O so na otu ndi mmadu ndi nwere gas ma nwekwaa agba di iche nke mere ka o di iche. Ọ na-acha uhie uhie na n'ime ya obere ìgwè ndị ọzọ na agba agba. Ọtụtụ na-emegharị ya na Jupiter mana ha enweghị njikọ ọ bụla ma ọlị. A na-egosipụta ọdịiche dị iche iche site na mgbanaka ahụ. Ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na mgbanaka ha bụ mmiri, mana ha siri ike dị ka icebergs, ugwu nke ice ma ọ bụ ụfọdụ bọọlụ snow tinyere ụdị uzuzu kemịkal karịsịa.
Ugbua na 1610 achọpụtara ikuku nke gbara mbara ụwa Saturn ekele Galileo na onyokomita. N’ime nchọta ahụ a mụtara na ifufe ndị na-agba gburugburu ha na-agba ọsọ na-enweghị atụ nke ọsọ ha. Ihe kachasị mkpa na ihe a niile na-awụ akpata oyi n'ahụ maka ndị maara ya, bụ na ọ na-eme naanị na ikuku ụwa.
Kedu ụdị ime na ikuku nke Saturn dị?
N'adịghị ka mbara ala ndị ọzọ dị na mbara igwe, njupụta Saturn pere mpe karịa mmiri dị na mbara ụwa anyị. Ihe owuwu a bu nke hydrogen. N’etiti mbara ala enwere enwere ike ikwenye na enwere ọtụtụ ihe dị mkpa na ya. Ọ bụ maka ihe dị arọ nke mebere ihe owuwu siri ike nke mbara ụwa nwere dịka ọ na-eme ka otu obere okwute jikọta ma ọ bụ kee otu nkume na ya. Nkume ndị a ha nwere ike iru okpomọkụ nke ihe ruru ogo 15.000.
Ya na Jupita a na-ahụta na ọ bụghị naanị nnukwu mbara ala abụọ dị na mbara igwe, kamakwa nke kachasị ewu ewu.
Banyere ikuku ya, ọ bụ hydrogen nwere ya. Enwere ihe ndi ozo nke mejuputara ya ma dikwa nkpa ka amara ihe nile enwere ike ime iji mara njirimara nke uwa nwere ike inwe n’ozuzu ya.
Ihe ndi ozo nwere obere doses. Ọ bụ maka methane na amonia. Enwekwara gas ndị ọzọ dị iche iche na-etinye aka na ihe ndị bụ isi dị ka ethanol, acetylene na phosphine. Ndị a bụ naanị ikuku ndị ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịmụ, n'agbanyeghị na amaara ya na ọ bụghị naanị mejupụtara.
Saturn yiri mgbaaka gbatịrị na mbara ikuku mbara ụwa site na 6630 km rue 120 km n’elu sistemụ Saturn ha mejuputara irighiri ihe na otutu mmiri ice. Ogo nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ dịgasị iche site na obere ahịhịa ájá dị na nkume na obere mita ole na ole. Albedo dị elu nke yiri mgbaaka na-egosi na ọ dịtụ n'oge a na akụkọ ihe mere eme nke usoro mbara igwe.
Ọnwa na satellites
N'ime njirimara ndị a niile na-adọrọ mmasị na-eme ka Saturn bụrụ ụwa na-atọ ụtọ ịmara, anyị ga-egosikwa satịlaịtị nke ọ mejupụtara. Ruo ugbu a satịlaịtị 18 amatala ma kpọọ ya ndị ọkammụta physics nọ n'ọhịa. Nke a na-eme ka mbara ụwa dịkwuo mkpa ma na-egosipụtawanye ya. Iji mara ha nke ọma, anyị ga-akpọ ụfọdụ n'ime ha aha.
Ndị kacha mara amara bụ ihe a na-akpọ Hyperion na Iapetus, bụ́ nke mmiri dị n’ime ha kpam kpam ma ha siri nnọọ ike nke na a na-ewere ha na ha kpụkọrọ akpụkọ ma ọ bụ n’ụdị ice n’otu n’otu.
Saturn nwere Satellite ime na mpụga. N'ime ndị dị n'ime ahụ enwere ndị kachasị dị mkpa nke orbit a na-akpọ titan dị. Ọ bụ otu n'ime ọnwa ndị kasị ibu nke Saturn, ọ bụ ezie na enweghị ike ịhụ ya ngwa ngwa dịka oke ikuku oroma gbara ya gburugburu. Titan bụ otu n'ime ọnwa ndị ọnwa nwere ikuku nitrogen.
Ime nke ọnwa a mejupụtara carbon hydroxide nkume, methane n'etiti ihe ndị ọzọ metụtara kemịkalụ dịka mbara ụwa dị ka ọ dị. Ọnụ ndị ahụ na-abụkarị otu ma ọ kachasị na ha ga-asị, ọbụlagodi nha.
Omume site na ụwa
Dị ka anyị kwurula na mbụ, ọ bụ mbara ala nke enwere ike ịhụ site na ụwa anyị ngwa ngwa. Enwere ike ịhụ ya na mbara igwe oge niile na ụdị ọ bụla nke holesist teliskop. Nchọpụta ya kachasị mma mgbe ụwa dị nso ma ọ bụ na-emegide ya, ya bụ, ọnọdụ nke mbara ala mgbe ọ dị ogologo nke 180 Celsius, yabụ ọ pụtara na-abụghị Sun na mbara igwe.
Enwere ike ịhụ ya n'ụzọ zuru oke na mbara igwe n'abalị dịka isi ọkụ na-anaghị enwu gbaa. Ọ na-egbuke egbuke ma na-acha odo odo ma were ihe dịka afọ 29 XNUMX/XNUMX iji wuchaa otu ntụgharị ntụgharị zuru oke na gburugburu ya gbasara kpakpando dị iche iche nke zodiac. Maka ndị chọrọ ịmata ọdịiche dị na mgbaaka nke Saturn, ha ga-achọ telescope nke opekata mpe 20x ka e wee hụ ya nke ọma.
Banyere nhụpụ ha site na mbara igwe, ụgbọ elu America atọ agaala iji hụ mpụta na ikuku Saturn. Akpọrọ ụgbọ mmiri ndị ahụ Pioneer 11 nyocha na Voyager 1 na 2. Shipsgbọ ndị a feere n’elu ụwa n’afọ 1979, 1980 na 1981, n’otu n’otu. Iji nweta ozi ziri ezi ma dị mma, ha buru ngwá ọrụ iji nyochaa ike na ike ọkụ nke radieshon na ụdị anya, ultraviolet, infrared na redio.
Enwekwara ha akụrụngwa maka ọmụmụ nke magnet na maka nchọpụta nke ihe ndị eboro ebubo na ọka uzuzu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị ga-amata mbara ụwa Saturn nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Satwa Saturn